IYunivesithi yaseBoston: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO WESIKOLO
Funda malunga ne-BU kunye ne-GPA, izikolo ze-SAT, kunye ne-ACT Scores Uyakufuna ukungena
IYunivesithi yaseBoston ikhetha ngokukhethekileyo kwinqanaba elingu-29 kuphela. Abafaki zicelo abaphumeleleyo phantse banamaxesha amanqaku kunye neemvavanyo zokulinganisa ezichanekileyo eziphezulu ngaphezu komyinge. Iyunivesithi iyamkela isicelo esiqhelekileyo, kwaye abafundi mabazithumele amanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO, izibhalo eziphakamileyo zezikolo, isicatshulwa somntu siqu , kunye neetayilathisi zengcebiso kunye nootitshala.
Kutheni Unokukhetha iYunivesithi yaseBoston
Efumaneka kwi- campus yasezidolophini kwindawo yaseKenmore-Fenway yaseBoston, ngasentshonalanga ye-Back Bay, iYunivesithi yaseBoston iyona-yesine eyona nto inkulu eyunivesithi yangasese kweli lizwe. Indawo yeB BU ibeka kwindawo elula kwezinye iikholeji zendawo kunye neeyunivesithi ezifana ne- MIT , iHarvard ne- Northeastern .
Kwizikhundla ezininzi zelizwe, iYunivesithi yaseBoston iphakathi kweeyunivesithi eziphezulu ezingama-50 e-US, kwaye nangona ubukhulu obukhulu besikolo, izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-10 ukuya ku-1 womfundi / umgangatho wezakhono. Izindlu zabafundi kwi-BU ngumxube we-eclectic ovela kwiindawo eziphakamileyo eziphezulu ukuya kwiidolophini zase-Victorian. Kwiimidlalo, iCandelo I-Boston University Terriers ikhuphisana kwiNgqungquthela yaseMelika East, i- Colonial Athletic Association kunye ne-Hockey East Conferences.
IBoston University GPA, iSAT & ACT Graph
I-GPA University GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Jonga i-graph-time real and count your chances of entry in this tool free from Cappex. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions yeYunivesithi yase-Boston
IYunivesithi yaseBoston ikhethe kakhulu kwaye iyakwamukela phantsi kwesithathu sabo bonke abafake izicelo. Kulo grafu ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye namahlaza awamkele abafundi, kwaye uyabona ukuba abaninzi abafundi abaya kwi-BU babenomyinge weB + okanye ngaphezulu, izikolo ze-SAT (RW + M) ngaphezulu kwe-1200, kunye ne-ACT engamanani angama-25 ngaphezulu. I-BU ayifuni nendawo ebhaliweyo kwi-SAT okanye ACT. Abafundi abane "imilinganiselo" kunye nama-SAT amanqaku angaphezu kwama-1300 anako ukuvunyelwa, kwaye kukho amachaphaza ambalwa abomvu (abafundi abachasiweyo) kwikhoneni elingakwesokudla legrafu. Nangona kunjalo, kukho ininzi ebomvu efihliweyo emva kwebala elihlaza okwesibhakabhaka kwindawo ephakathi kwegrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye namanqaku ovavanyo olulinganiselweyo ojoliswe kwiYunivesithi yaseBoston baya kufumana iileta zokulahlwa. Ngenxa yoko, nangona iYunivesithi yaseBoston iyisikolo sokufanisa ngokumalunga neziqinisekiso zakho, kufuneka uqiniseke ukuba ufake isicelo kwizikolo zokhuseleko lwezibini xa kwenzeka isigqibo sokwamkela.
Ukwamkelwa kwi-BU kuninzi ngaphezu kwedatha yenombolo evezwe kule grafu ngasentla. Iyunivesithi isebenzisa isicelo esiqhelekileyo . Izicelo eziqinileyo ziya kuba nencoko eyinqobileyo , iincwadi ezinamandla ezincomekayo , kunye nemisebenzi enomdla. IYunivesithi yaseBoston, njengamanyunivesithi akhethiweyo yelizwe, iyakwamkelwa ngokupheleleyo . Abantu abamkelekileyo bafuna abafundi abaya kucebisa uluntu lwasekampus kwaye bazise ekampus ngaphezu kwamanqanaba aqinekileyo kunye amanqaku okuvavanya. Abafundi abanolwazi oluthile okanye abanolwazi oluqinileyo ukuba baxelele baya kukhangeleka ukuba ngaba amabala kunye neemvavanyo zokuvavanya azinakwenzeka.
Imilinganiselo yokungena kwi-BU iyahlukahluka esikolweni nakwiikholeji, kwaye abanye abafake izicelo bangafumana ukuba bayamkelwa kwiKholeji yeZifundo eziPhezulu kwaye akusiyo isikolo sabo esikhethekileyo okanye iikholeji. Izicelo kwiKholeji yezobuGcisa kunye neYunivesithi yeeNkqubo zeeNyango neZonyango ezikhawulezileyo aziyi kuqwalaselwa ukuba zivunywe kwezinye iikholeji. Kwakhona phawula ukuba iintlola-ndlebe aziyiyo inxaxheba kwinkqubo yokungena kwi-BU ngaphandle kweeNkqubo zeeNyango neZonyango eziKhuselekileyo, kwaye abafundi abafaka isicelo kwiKholeji yoBugcisa boBugcisa kufuneka babe ngabaphicothi-zincwadi okanye bangenise iphothifoliyo.
Ekugqibeleni, khumbula ukuba iYunivesithi yaseBoston inenkqubo yeNkqubo yokuQala . Ukuba i-BU ngokuqinisekileyo isikolo sakho esikhezulu esikhethiweyo, ukusetyenziswa kwangethuba kuyindlela enkulu yokubonisa umdla kunye nokuphucula amathuba akho okuvunyelwa.
I-Boston University Acceptance Rate: 29%
ISAT Math: 630/740
UMTHETHO WOMTHETHO: 28/32
UMSEBENZI IsiNgesi: 28/34
Olunye ulwazi lweYunivesithi yaseBoston
Ngaphandle kokwamkelwa okukhethiweyo, iYunivesithi yaseBoston inomyinge onomgangatho ogqityiweyo weminyaka emine kunye nenqanaba elincomekayo leenkqubo zemfundo. Jonga iindleko: I-tag yexabiso leyunivesithi iyonke ingaphezu kwama-70,000 ayi-$ 70,000, kwaye i-half-half of the learners 'matriculated ifumana inkxaso-mali.
Ubhaliso lwabonke: 32,695 (i-17,944 izifundo zakudala)
Iindleko (2017 - 18)
Imfundo kunye neMali: i-$ 52,082
Igumbi neBhodi: $ 15,270
Ezinye iindleko: $ 1,950
Iindleko ezipheleleyo: $ 70,302
Uncedo lwezeYunivesithi yaseBoston (2015 - 16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 54%
Izibonelelo: $ 34,255
Imali: $ 9,652
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: Ubunjineli bezoBomi, i-Biology, uLawulo lwezoShishino, iZifundo zoNxibelelwano, i-Economics, iiSayensi zezeMpilo, iiNtlalontle zoLuntu, iiNzululwazi, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology, iRadio & Television.
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka-4: 81%
Ezemidlalo zaMadoda: I- Lacrosse, Ukukhawula, Ukubhukuda kunye nokuDoba, iThenti, i-Track and Field, iBhola lebhola, iHockey iHockey
Ezemidlalo zaBasetyhini: Ukukhawulela, iNsima, iHockey, iGalofu, iThenti, iBhola yeBhola, i-Track and field, iHockey yeHlaki, iNgcahla, iSoftball
Ukuba uthanda iYunivesithi yaseBoston, Qinisekisa ukuba Hlola ezi Zikolo
Abafakizicelo kwiYunivesithi yaseBoston bavame ukukhangela kwiiyunivesithi ezizimeleyo ezikhethiweyo kwimizi yasezidolophini. Ezinye iindlela ezikhethiweyo ziquka iYunivesithi yaseNew York , iYunivesithi yaseChicago , iYunivesithi yaseBrown , ne- Northeastern University . Gcina nje ukhumbule ukuba i-NYU, uBrown, kunye neYunivesithi yaseChicago zikhethwa ngaphezu kwe-BU.
Ukuba ukhangele into ethile ngethegi yentengo ephantsi, qiniseka ukuba ujonge kumaziko karhulumente afana ne- UCLA kunye noMass Amherst .
Umthombo Weenkcukacha: Igrafu ngokukhawuleza kweCapepex. Yonke enye idatha evela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo.
Iintlobo zeeNkcukacha ezisetyenziswe kwiNqaku leMculo
I-American English English (EAE)
Ibali elipheleleyo le-Avatar Aang Ukufa